Ogaden News Agency (ONA) – Dhalinyaradii shilka ku geeriyootay oo aaskoodii aan loo kala hadhin
Dhalinyaradii shilka ku geeriyootay oo aaskoodii aan loo kala hadhin
Posted by ONA Admin	/ June 29, 2011
Waxaa maanta lagu aasay magalada Johannesburg labadii dhalainyarada ahaa ee shilka naxdinta leh ku geeriyooday. Waxaa aaska labada xubin ee qaaliga ahaa ka soo qaybgalay dadweyne lagu qiyaasay ilaa 1000 ruuux oo ah muwaadiniinta S.Ogadenya oo ka kala yimid gobolada dalka Koonfur Afrika iyo Somalidii daganayd Johannesburg.
Dhalinyaradan ka tirsanaa ururka OYSU ee shilka naxdinta leh ku geeriyooday ayaa hawlo shaqo oo jaaliyada Ogadeneya ay leedahay oo loo diray u socday marka ay ajasha ku dhacday.
Hadaan dib u jaleecono taariikh nololeedkoodii inta Alle naga garansiiyo 2ba marxuum (inshaa Alaah) ee ku geeriyooday shilka naxadinta leh;
Allah ah u naxariistee Axmed Raasin Sheikh Cumar wuxuu ku dhashay magaalada Godey 1.2.1983, wuxuu ku barbaaray isla magaladaas. Wuxuu wax barashadisa hoose dhexe ku qaatay isla magalada Godey wuxuuna Ogadenya ka soo tagay 1994 isga oo u adkaysan wayay dhibka iyo tacadiga ka tagan gudaha Ogadenya.
Allaha u naxariistee Axmad Raasin wuxuu u soo haajiray wadanka Kenya gaar ahaan Xerada Qaxootiga ee Iffo halkaasoo uu waxbarashadiisii ka sii watay wuxuuna ku dhameeyay Dugsiga Hoose Dhexe iyo Sare ee Iffo. Ka dib wuxuu u soo dhoofay sanadkii 2002dii wadanka Koonfur Wuxuuna mudo daganaa magaalada Port-Elizabeth ugu dambaystiina marxuumka (inshaa Alaah) wuxuu u wareegay magalada Johnnesburg halkaas oo uu mudooyinkii ugu dambeeyaya ka hawl galayay.
Allah ha u naxariistee Axmed wuxuu ahaa aasaaseyaashii ururkii dhalinyarada ee OSFSA kadib wuxuu ku biiray SOYA ka dib asaga oo jecel inuu ka hirgaliyo gobalada qaarkood ayuu SOYA la midoobay Ururka Dhalinyaraeda ee OYSU. Sidoo kale waligii kama dhaxbixin Jaaliyaddaha Soomalaidda Ogadenya wuxuuna ahaa nin dhalin yaro ah oo aad ugu gacan furan halganka iyo hawlaha dhalinta isla markaasna shaqooyinka loo diro aad uga soo baxa si hagar la’aan ahna ugu jajabnaa, wuxuuna ahaa nin aad u furanfircoon oo codkar ah. Hadana waxa uu ahaa Madxa Hogaanka Warfaafinta OYSU ee Koonfur Afrika iyo Ku-xigeenka hogaanka warfaafinta gobolka GB. Alla ha u naxariistee Axmed wuxuu ifka kaga tagay Gabadh 5 sano Jir ah.
DR Mahamed Cabdulaahi Daahir wuxuu ku dhashay 1.7.1979 dagamada Garbo. Waxaa loola soo qaxay asagoo yar wadanka Soomaliya gaar ahaan xeradii qaxootiga ee Jalalaqsi halkaasoo uu ku qaatay tacaliinta dugusiga ilaa ka sare. Burburkii Somaliya kadib waxay rerkooda u qaxeen wadanka Kenya xereda qaxootiga ee Ifo. Wuxuna ka shaqeen jiray isbitaalka Ifo ee UN-ta mudo5 sano ah, ka dib wuxuu aaday magalad Nairobi isagoo u aaday waxabarasho caafimaad, hasa ahaatee asagoon dhameesan ayuu ka soo aaday wadanka Koonfur Afrika 2003. Wuxun ahaa dhalinyarada ka shaqeesata wadanka KA. Allaha u naxariistee waxaa lagu tilmaami jiray shaqsi aad u xoog furan aadna hada iyo goor u jecelaan jiray inuu dadkiisa wax u qabto. Wuxuu ifka kaga tagay Alaaha u naxariistee 1wiil 1hal gabdh iyo hooyadood.
Soomalida dagan Johannesburg ayaan u kala hadhin aaska 2marxuum waxaana lagu tilmaamay aaskii ay dadakii ugu badanaa ka soo qeeb qaateen wadankan Koonfur Afrika. Waxaa kaloo goobta asaka joogay dhamaan maamulada iyo hawlwadeenada jaaliyada Ogadeneya ee JOKA.
MAAMULKA JAALIYADA OGADENEYA EE JOKA AYAA TACSI TIIRAANYO LEHE UDIRAAYA DHAMAAN UMADA RERE OGADENEYA IYO EHELADII IYO QARAABADII AY KA BEXEEn 2da MARXUUM IYO DHAMAAN DADAKA JECEL HALGANKA OGADENEYA.
omar jigjiga ONA/KA/GB
ALLAAH, inta yoomul Maxsharka kadhiman dalladihiisa qaaliga ah ee mujaahidiintu iska leeyihiin ayaa Shuhadadu Insha.ALAAH ay kusii sugnaan, kadibna waxaan Alle uga rajayn haynaa-Jannatul Firdawsadii qaaliga ahayd. Dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo Naftood hurayaasha Ogadenya qaybahooda kala gadisanba waaxn leenahay Samir iyo Iimaan kaamil ah Alle haynaga wada siiyo, Aamiin, Aamiin, Amiin